1. Beddelaan MP4 in DVD
2. Guba MP4 in DVD Player
4. Top 15 MP4 in DVD gubi
5. Guba MP4 in DVD on Windows 8
6. Gubashada MP4 la Windows DVD Kan sameeyey,
7. Guba MP4 la iDVD
8. U beddelaan MPEG4 in DVD
9. Guba MP4 DVD in la Nero
10. Gubashada MP4 la Wondershare DVD Creator
11. 7 of MP4 ugu wanaagsan ee DVD converters
12. ma dajiyaan karaa mp4 ee DVD cirib?
4. In la abuuro DVD ka MP4
Ma doonaysaa in ay daawadaan videos MP4 DVD ciyaaryahan aad u? Waa hagaag, aynu wada ognahay in ciyaartoyda DVD joogto ah wuxuu ku siinayaa taageero aad u fiican MPEG-2 DVD file-dhismeedka ah, oo aad u yar oo iyaga ka mid ah waa la jaan-MPEG 4 videos. Sidaas darteed haddii aad soo bixi filimada ama clips diiwaan MP4 ah (MPEG-4) qaab video, waxaan kuu soo jeedinaynaa in loogu badalo qaab MP4 in ay qaab kale sida MPEG ama gubi faylasha gal DVD ah si toos ah u playbacks ciyaaryahanka DVD ah.
In this article, Wondershare ka DVD Creator ( DVD Creator for Mac ) si weyn lagu talinayaa inuu kaa caawiyo inaad ku beddelato video files oo dhan cayn kasta oo si joogto ah oo kale-socon DVD qaabab video. Ka dib markii in, aad u daawato cozily aad ciyaaryahan DVD guriga ama TV. Fadlan tixraac hago tallaabo-tallaabo hoos ku qoran oo ku saabsan sida aad u samayn kartaa PC Windows ka hawlgala. Haddii aad socda Mac ah, fadlan la qaato version Mac ah si loogu badalo files MP4 aad sidaasay ahaan doontaa socon ciyaaryahan DVD si la mid ah.
Diyaarinta : Download version jirrabaadda kuwa aan DVD Creator ah si ay u gubaan files MP4 aad u gal DVD ah.
1 dar files MP4
Riix + inay dajiyaan MP4 videos aad galay interface ugu weyn ka dibna riix ↑ iyo ↓ inay u habayn iyo amarka faylasha aad uploaded.
2 Dooro DVD menu (Ikhtiyaar)
Waxaa jira in ka badan 40 foom oo ma guurto ah oo firfircoon DVD menu free dhisay-in aad la raaxaysatay oo DVD qoraalka. Si aad u hesho suuqa kala tafatir ah, riix Menu in bar doorasho xaq ku xusan interface ka. Markaas, qaado mid aad jeceshahay in astaysto content qoraalka, jir ama saamayn button ee.
Fiiro gaar ah: qaabdhismeedka menu ayaa lagu soo bandhigi doonaa in ay leeg- navigation dhinaca bidix ka. Waxa kale oo aad sameyn kartaa saamiga dhinaca at 16: 9 ama 4: 3 sida video baahidaada. On the Menu suuqa kala 's, aad si xor ah ku dari kartaa content qoraalka iyo in la beddelo jir ama saamayn button ee.
3 MP4 in ciyaaryahanka diinta DVD Bilow
Riix Kulanka Xiisaha si loo hubiyo in dhammaan dhibaatooyinka soo tago sida aad u jeclaan doonaa in ay noqdaan. Marka qanacsan, riix Guba si loogu badalo files MP4 ay u DVD ciyaaryahan aad. Ka hor inta gubanaya, fadlan tixgeliyo oo ka mid ah Standard TV ; Dooro NTSC haddii aad degan tahay ee USA, Canada iyo Japan, ama Pal haddii aad deggan Europe ama dalalka kale ee Asian.
Fiiro gaar ah: Ka sokow diinta file MP4 ah in ciyaaryahan DVD ah, taas xirfad DVD Creator ( DVD Creator for Mac ) xitaa kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo videos MP4 in ay la file image ISO iyo DVD Folder sidaas noqon doonaa in aad awood u ciyaari videos ku dhamaan ciyaartoyda DVD joogto ah oo aan khasaarin ah oo tayo leh. Waxaad dooran kartaa qaabab wax soo saarka aad ku salaysan aad u baahan tahay inta lagu jiro tallaabo DVD ku gubanayso.
Hadda aad ku xidhan karto ciyaaryahanka DVD si aad-qeexidda sare TV tayada ah loo maqli ka xoogbadan. Haddii aad jeclaan doonaa si uu u daawado MKV ah, wmv, MOV ama file videos MTS, ee Wondershare DVD abuure sidoo kale samayn kartaa in aad u gudahood dhowr qasabno of mouse ah.
Fadlan daawato video ku lifaaqan u tutorial ah tallaabo-tallaabo:
Beddelaan Mpg in MP4 : Hel Mpg weyn oo MP4 for Mac / Win (Windows 10 ka mid ah) si ay kaaga caawiyaan in aad loogu badalo file Mpg ah in MP4 ah.
Play MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 : Haddii files MP4 aad ku guuldareystay inuu Radidiyaha on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360, waxaad heli doontaa in aad ogaato sababta oo halkan xal loo helo.
Ku dar subtitles in MP4 , Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida in aad ku darto files Cinwaan in videos MP4 aad ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah).
Wondershare DVD Kan sameeyey barbardhig Video Converter Ultimate iyo DVD Creater
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan MP4 in DVD ah Player